Chautari Daily » भागेर बिहे गर्दा यस्ताेसम्म दुःख ! (भिडियोसहित)
भागेर बिहे गर्दा यस्ताेसम्म दुःख ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं / युवा वैज्ञानिक सरोज प्रजा (चेपाङ) ले अन्तरजातिय बिवाह गरेका छन् । सरोजले सर्लाही निवासी आशिका अधिकारीसँग प्रेम गरेका हुन् । तर, उनीहरुको बिवाहलाई आशिकाको परिवारले भने अझै स्वीकारेको छैन । सरोज र आशिकाले झण्डै डेढ वर्ष अघि भागेर बिवाह गरेका हुन् ।
उनीहरुको अहिले ६ महिनाको छोरी छिन् । पारा मोटर उडाएर चर्चामा आएका सरोज पहिलो पटक श्रीमतीसहित मिडियामा आएका हुन् । आशिकाको परिवार पहिले सरोजको स्थायी घर रहेको ठाउँ चितवनको राप्ती नगरपालिकामै बस्थ्यो । तर, उनीहरुको प्रेम सम्बन्धबारे थाहा पाएपछि आशिकाको परिवार त्यहाँबाट सर्लाही सर्यो ।
परिवारले स्वीकार्ने स्थिति नदेखिएपछि आशिका भागेर चितवन आइन् । अहिले यो जोडी खुशीका साथ जीवनयापन गरिरहेको छ । सरोजले आफ्नो काममा श्रीमतीले पूर्ण सहयोग गर्ने गरेको बताए । कुराकानीमा उनीहरुले एकअर्का प्रतिको प्रेम पनि दर्शाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २७ श्रावण २०७६, सोमबार ०२:१३